Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo goordhow ka bilaabaneeyso Muqdisho – Puntland Voice
February 8, 2017 8:09 am Views: 17
Waxaa maanta oo Taariiqdu ay ku beegantahay 8-Febuary maalin Arbaco ah Muqdisho lagu wadaa in ay ka dhacdo Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo goordhow la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Guddiyada iyo martida ka qeeybgaleeysa Doorashada ay goordhow ku xarooneeyso xarunta Afisyooni ee ciidamada cirka halkaasi oo Doorashada ay ka dhaceeyso.
In kabadan 22 Musharax ayaa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya kuwaasi oo xalay Muqdisho ka waday diyaargaroowgii ugu dambeeyay ee la tashiyada iyo kulamada Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada inkastoo oo aan la saadaalin karin cida ku ku guuleeysaneeysa ayaa hadda siyaasiin xog ogaal ah waxa ay saadaalinayaan in midkood uu ku guuleeysan karo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sh.Axmed.
Amaanka Guud ee Magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana xiran guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho.